Janakpur News - Page 20 of 36 - Trending News Portal of Nepal
नेपालले अमेरिकामा मन्दिर बनाउने, छ लाख डलरमा जग्गा खरिद
March 27, 2017	ओनलाईन पत्रिका0379
वासिङ्टन डिसी, १४ चैत । नेपालीको बाहुल्यता भएको मेरिल्यान्ड राज्यमा नेपाली संस्कृति झल्कने हिन्दू बौद्ध मन्दिर निर्माणका लागि छ लाख ८० डलरमा जग्गा तथा भवन खरिद गरिएका छन् । बैंकको लिलाममा रहेको करिब १० लाख डलर पर्ने मूल्यको ३१ एकड जमिन र बङ्गला, सहायक घर, स्वीमिङ …
March 27, 2017	ओनलाईन पत्रिका043
१४ चैत, काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी एसीसी इमर्जिङ नेशन्स कप क्रिकेट अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेल खेलिरहेको नेपालले पाकिस्तान यू-२३ टोलीसमक्ष १८१ रनको बिजय लक्ष्य पेश गरेको छ । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १८० रनको योगफल तयार गर्‍यो ।सुरुवाती तीन …
जहाँ गोरो बच्चा जन्मिनुु अपराध हुन्छ, तत्कालै गरिन्छ बच्चाको हत्या
March 27, 2017	ओनलाईन पत्रिका045
सुन्दैमा आङै सिरिङ्ग हुने । यो दुनियाँमा एउटा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ गोरो वर्णको बच्चा जन्माउनु अपराध हुन्छ । यदि गोरो वर्णको बच्चा जन्मिएमा उसलाई जन्मिनेबित्तिकै समाप्त पारिन्छ । परम्पराको नाममा हुने यो भयानक कृत्य भारतको केन्द्र प्रशासित अण्डामान टापुुमा बस्ने एउटा आदिवासी समुदायमा व्याप्त …
स्वास्थ्यका लागि अमृत हो पुदिना, हेर्नुस् यसका १२ फाइदा
March 27, 2017	ओनलाईन पत्रिका049
एजेन्सी । गाउँघरमा पाइने पुदिनामा कैयौं औषधिको गुण पाइन्छ । यसमा भिटामिन ‘ए’ को मात्रा धेरै हुने भएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसले मुहार चम्किलो बनाउन पनि त्यतिकै सहयोग गर्छ । यो गर्मीका समयमा स्वास्थ्यका लागि झन बढी फाइदाजनक मानिन्छ । जस्तैः – पुदिनाको पात पिसेर निधारमा …
March 27, 2017	ओनलाईन पत्रिका040
काठमाडौं, १४ चैत । गत मंसिर ६ गते एकीकरण भएको राप्रपा फेरि फुटेको छ । असन्तुष्ट समूहको आइतबार बिहान भएको भेलाले डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको अध्यतामा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको छ । पार्टीको नाम एकीकृत राप्रपा राखिएको छ । चुनाव चिन्ह पुरानै कायम गरिएको छ । …
स्थानीय चुनावका लागि चीनले दियो १४ करोड ४० लाख
March 27, 2017	ओनलाईन पत्रिका0164
१४ चैत, बेइजिङ । नेपालको स्थानीय निर्वाचनका लागि चीन सरकारले ९ मिलियन चिनियाँ युआन अर्थात करिब १४ करोड ४० लाख नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपतिवीच सोमबार बेइजिङमा भएको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले स्थानीय निर्वाचनका लागि सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा …
डा. सीके राउतको पुनः १० दिन म्याद थप
March 27, 2017	ओनलाईन पत्रिका047
हुलाकी न्यूज, लहान । नेपाल प्रहरी, लहानको हिरासतमा ५० दिन देखी रहेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केन्द्रीय संयोजक डा. सीके राउत लगायत १० जना नेता कार्यकर्ताहरुलाई हिरासतमा राख्न शुक्रबार पुनः १० दिनको म्याद थप गरिएको छ । जिल्ला अदालत सिरहाले बिना कुनै बहस, सुनुवाई वा प्रहरीसँग अनुशन्धन रिपोर्ट नै नमागी पाँचौपटक …
डा. राउतको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेकाहरुमाथि प्रहरी दमन
March 27, 2017	ओनलाईन पत्रिका056
हुलाकी न्यूज, लहान । सिरहा जिल्ला अदालत परिसर बाहिर शुक्रबार डा. सीके राउतको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेकाहरुमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ । शान्तिपूर्ण नारा जुलुस गरिरहेका डा. राउतका समर्थकहरुमाथि नेपाल प्रहरीले शोषणको परकाष्ठा पार गर्दे बर्बर दमन गरेको आरोप स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको छ । प्रहरीले लाठीचार्ज गरी उपेन्द्र यादव, …
सरकारले संघीयतालाई समाप्त गर्न खोजिरहेको छ : नेता राय
March 27, 2017	ओनलाईन पत्रिका044
हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । तराई मधेश सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले सरकारले संघीयतालाई समाप्त गर्न खाजेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मधेशी मोर्चाका नेतासमेत रहेका रायले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न खोजेर सरकारले संघीयतालाई नै समाप्त पार्न खोजिरहेको आरोप लगाएका हुन् । उनले …
मोर्चा पनि चुनावमा जाने तयारीमा छ : माओवादी नेता सापकोटा
March 27, 2017	ओनलाईन पत्रिका051
हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा पनि चुनावमा जाने तयारीमा रहेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सापकोटाले मधेशी मोर्चापनि चुनाव जाने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने, ‘मोर्चा पनि चुनावमा जाने …